IDistruction Boyz ithi iyivivele impi yobunikazi bengoma eyashisa izikhotha | News24
IDistruction Boyz ithi iyivivele impi yobunikazi bengoma eyashisa izikhotha
Cape Town - Iculo elashisa izikhotha leDistruction Boyz elisihloko sithi Omunye lalizuzisa kakhulu leli qembu lomculo weGqom njengoba laze ladayisa igolide ngenxa yokuduma kwalo.
Nokho impumelelo yaleli qembu ilandelwa yizinkulumo njengoba ngasekupheleni konyaka owedlule kwavela imibiko ethi leli culo lebiwa ku-DJ wakuleli, uDJ Lag.
ICity Press yabika ukuthi uphenyo olwenziwa yimenenja kaDJ Lag, uSevi Spanoudi weBlack Major, lwaveza ukuthi isigubhu saleli culo sifana ncamashi naleso esiseculweni likaDJ Lag elithi Trip to New York.
Esitatimendeni esithunyelelwe iphephabhuku iDRUM, uDJ Tira – oyimenenja yeDistruction Boyz – ucacisa ngalezi zinsolo.
“Omunye wabhalwa waphinde waphrojuswa nguDJ Mphyd, wabe esewudayisela iDistruction Boyz,” esho.
OLUNYE UDABA: Isidididi ngengoma yeDistruction Boyz oKhozini
“Akukho ngxenye yeculo likaDJ Lag eyasetshenziswa ngesikhathi kuphekwa leli culo elashisa izikhotha elithi Omunye.”
UTira uthi labo abathintekayo basebenzisa amandla ezinkundla zokuxhumana ukubhebhethekisa izindaba eziyihaba ngenhloso yokuhudulela amagama abo odakeni kanye nokufaka ungabazane kubona kanye nalabo abasebenzisana nabo kule mboni.
“Kuyabonakala ukuthi uDJ Lag usetshenziswa yizimbungulu ezisebenzisa igama lakhe ukuzikhuphula," kusho uTira ephendula ngodaba olubhalwe yiSunday World.
Lesi sitatimende siphinde sacacisa ngokuthi leli qembu kanye noTira bayilungele impi yezomthetho. "Siyivivele impi yezomthetho."
Nokho, iCity Press, ibike ukuthi uTira usezingxoxweni noDJ Lag mayelana nesivumelwano abangasenza esithinta leli culo.